ပြည့်စုံတဲ့ဘဝလား။ - ဆွစ်ဇာလန်၏ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းဘုရားကျောင်း
မီဒီယာ > မဂ္ဂဇင်းအာရုံစိုက်ယရှေုသညျ > မဂ္ဂဇင်းအာရုံစိုက်ယရှေုသညျ 2019-04 > တစ်ဦးကပြည့်စုံရာဘဝ?
ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ရှုထောင့်ကိုပြောင်းလဲပြီးအသက်တာကိုသမ္မာကျမ်းစာရှုထောင့်မှကြည့်ပါကဤစာရင်းသည်အလွန်ကွဲပြားခြားနားလိမ့်မည်။ ဘဝသည်ဖန်ဆင်းရှင်ထံပြန်သွားသည်။ လူသားများသည်အစကသူနှင့်ရင်းနှီးသောဆက်ဆံရေးရှိရန်ငြင်းဆန်ခဲ့သော်လည်းသူသည်လူတို့ကို ချစ်၍ သူတို့၏ကောင်းကင်ခမည်းတော်ထံပြန်ပို့ရန်အစီအစဉ်ရှိသည်။ ဘုရားသခင့်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ရန်ဤကတိထားသည့်အစီအစဉ်သည်လူသားများနှင့်ဘုရားသခင်ဆက်ဆံပုံအကြောင်းကျွန်ုပ်တို့အားဖော်ပြသည်။ သားတော်ယေရှုခရစ်၏လုပ်ဆောင်မှုကသူ့အားလမ်းပြန်လျှောက်ခဲ့သည်။ ၎င်းတွင်အရာအားလုံးကိုမှေးမှိန်စေသောထာဝရအသက်နှင့်ဆိုင်သောကတိတော်နှင့်လည်းရင်းနှီးသောဖခင်နှင့်ကလေးဆက်ဆံရေးတွင်သူနှင့်အတူကျွန်ုပ်တို့အတူတကွ ဦး ဆောင်မည်
ကျွန်ုပ်တို့၏ဘ ၀ များကိုအဆုံးအဖြတ်ပေးသော ဦး စားပေးမှုများသည်ခရစ်ယာန်ရှုထောင့်မှသိသိသာသာလွှမ်းမိုးသည်။ ထို့နောက်ပြည့်စုံသောဘဝ၏အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်သည်အမှန်တကယ်လုံးဝကွဲပြားခြားနားသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏စာရင်းထိပ်တွင်ဘုရားသခင်နှင့်ပြန်လည်သင့်မြတ်သောဆက်ဆံရေး၊ ထာဝရအသက်မျှော်လင့်ချက်၊ အပြစ်လွှတ်ခြင်း၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ကိုကိုယ်သိသောစိတ်၏စင်ကြယ်ခြင်း၊ ရည်ရွယ်ချက်နှင့်ဆိုင်သောရှင်းလင်းသောအဓိပ္ပာယ်၊ ဘုရားသခင့်ရည်ရွယ်ချက်တွင်ယခုနှင့်ယခုပါ ၀ င်ခြင်းတို့ဖြစ်လိမ့်မည်။ သဘာဝတရားသည်ဤလောက၏မစုံလင်မှုအပြင်လူသားချင်းများကိုဘုရားသခင်၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာနှင့်ထိတွေ့စေသည်။ ပြည့်စုံသောဘဝ၏ ၀ ိညာဉ်ရေးရာကဏ္ aspect သည်ပြည့်ဝစုံလင်သောကာယနှင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြည့်စုံခြင်းကိုရလိုသောဆန္ဒကိုအောင်နိုင်ခြင်းဖြစ်သည်။
Wir wissen aus dem Alten Testament, dass Gott mit den Stämmen Israels in enger Beziehung stand. Er bekräftigte diese durch einen Bund, den er mit ihnen auf dem Berg Sinai schloss. Er beinhaltete die Verpflichtung zur Einhaltung seiner Gebote sowie Segnungen im Falle von Gehorsam bzw. Flüche, die sie infolge von Ungehorsam erhalten würden (5. မို ၃၀:၃; 3. Mo 26). Die damit versprochenen Segnungen, die der Einhaltung des Bundes folgen sollten, waren weitgehend materieller Natur – gesundes Vieh, gute Ernten, Siege über Feinde des Staates oder zu gegebener Jahreszeit Regen.
သင့်အားသခင်ယေရှုကမ်းလှမ်းသော“ ပြည့်စုံသောအသက်” သည်ယခုခေတ်၌ကောင်းသောဘဝထက်များစွာကြွယ်ဝပြီးပိုမိုနက်ရှိုင်းသည်။ ငါတို့ရှိသမျှသည်ဤလောက၌ကောင်းမွန်သောဘဝကိုပိုင်ဆိုင်လိုကြသည်။ ကွဲပြားသောရှုထောင့်မှရှုမြင်ပြီးအဝေးမှကြည့်လျှင်သင်၏ဘဝသည်ဝိညာဉ်ရေးရာကြွယ်ဝမှုတွင်အဓိပ္ပာယ်နှင့်ရည်ရွယ်ချက်ကိုသာရှာတွေ့နိုင်ကြောင်းထင်ရှားလာသည်။ ယေရှုသည်မိမိ၏စကားတော်အတိုင်းသစ္စာရှိနေသည်။ သူကသင့်အား“ ပြည့်ဝစုံလင်သောဘဝ၌” စစ်မှန်သောအသက်တာကိုကတိပေးထားသည်။
ဂယ်ရီ Moore ကဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်